अस्तित्व | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 07/04/2009 - 09:18
अन्ततः हामी छुट्टयिौँ । छुट्टनिु थियो, कि थिएन ? छुट्टिने गरी हामी एक भएका नै थियौँ कि थिएनौँ अथवा हाम्रो मिसावटमा अब छुट्याउन सक्ने किसिमको के छ र ? हामी दुवैले पहिलो स्पर्शमा एकअर्कालाई छोएका थियौँ । हामीमा अपार सामीप्य थियो नै र त्यागसमेत थियो ।
अब सम्पूर्ण त्याग मेरो परिकल्पनामा गएर अल्झियो । त्यागको मेरो अर्थ र त्यागको उनको अर्थमा वेमेलका फलहरू फलिरहे । हामीलाई सन्तानको लहराले पनि अल्झाउन सकेन । हाम्रो वैदिक बिहे, बिहेपछिकै होस्, पहिलो प्यार र प्यारा विगतहरू चिरिँदै गए ।
हाम्रो यथार्थ हामीबीचको व्यक्तित्व विवाद थियो । अरू केही थिएन । एउटा घर थियो । समर्पण थियो । सत्यता जरुर थियो । एक पति र एक पत्नीत्वपूर्ण पालना गरेका हामीले एकअर्कालाई स्वतन्त्रताको नाममा कहिल्यै घात गरेनौँ । सन्देह, शङ्का अहँ सम्झना पनि गरेनौँ । आरोपका वाणहरू, छरेनौँ तर पनि हामी सँगै बस्न सकेनौँ । व्यवहारमा नमिलेको फाटोले मन पनि फाट्दै जाँदोरहेछ । मन फाट्यो । बोली फाट्यो र फाटिँदै गयो हाम्रो जीवनको सगोल फाँट ।
यो घर, उनले छोडेर गएको घर, कुनै दिन उनको एकसूत्रीय सपना थियो । एउटी पत्नीको पतिसँग माग्ने एकल प्रस्ताव थियो । त्यो पनि छोडेर गइन्् उनी । अझ पसिनाका कुरा गर्दासमेत हामी बराबरीमा तामेल हुन्छौँ । उनको परिश्रम, जागिर र तपस्यासमेत हो यो घर । आज घर छ । कोठाहरू छन् । उनकै छनोटका रङ बोकेर यी गुलावी पर्दाहरू हल्लिरहेका छन् तर उदासीले छ्याप्प छन् । सन्नाटा छछल्किरहन्छ कोठाभरि । जागिरको सङ्घर्ष, डेराको साँगुरो र हल्ला कर्जाको भारी सबै सँगै बोक्यौँ र भर्खर मात्र सुखले पाइला हाल्न लागेको हाम्रो जिन्दगीका बन्धनहरू खुकुलिन थाले ।
बन्धनहरू यति कफल्ला हुन सक्दारहेछन् । हामीमा आएको परिपक्वतासँगै, तर्कसँगै, हिम्मतसँगै हाम्रो बन्धन पनि खुकुलिँदै गयो । हाम्रो तर्क अरू केही थिएन । म उनलाई आमा जस्तो सम्झन्थेँ । उनी आफूलाई आˆनो बाटोमा साहसी पाउँथिन् र उद्देश्यहरूको लहरमा हराउँथिन् ।
मेरी आमा । जब म घर र्फकन्थेँ, ती मुस्काउँथिन् । गलिस होला भन्थिन् । रुवाउँथिन् । दिनभरि ती काम गर्थिन तर म बिसाउँथे । मैले त कहिल्यै आमाको सोच सोच्न भ्याइँन । मेरो भोको स्तर, मेरो रोग, मेरा लुगा, मेरा स्वादहरू, जहाँजहाँ म छु, म जसरी सुत्छु, म जुन स्वरमा रेडियो सुन्छु, म कुन समयमा पानी पिउँछु, उनले कसरी जान्दथिन् ? सधैँ हाजिर हुन्थिन्, म आमामा रोपिँदै गएँ । आपाङ्ग हुँदै गएछु । मलाई सम्पूर्ण विश्वका आमाहरू यसै गर्लान् जस्तो लाग्थ्यो । आमाको उत्पत्तिको अर्थ नै यही होला भनेर म अनर्थ पढ्दै गएछु ।
पछि वयस्क भएँ । बिहे गरेँ । आमामा रोपिएको म उनमा सर्दै गएँ । मेरो आमाबिम्ब क्रमशः उनीद्वारा पूरा हुनुपर्ने सोचले ग्रसित हुँदै गयो । म आमा पाउन उनीमा खानतलासी गर्न थालेँ । यसरी मेरी श्रीमती, मेरै छोराहरूकी आमालाई म आˆनै आमा जस्तो हुन दबाब दिँदै गएँ ।
समयको गतिले धेरै परको यात्रा तरेको रहेछ । मेरी नपढेकी आमा र जागिरे श्रीमती, वात्सल्यको अपरिमितता र मायाको बराबरी कसरी हिसाब मिल्थ्यो र ? म बिगि्रसकेको थिएँ । सामाजिक सेरोफेरोमा उनको व्यक्तित्व स्थापित हुँदै थियो तर ममा सेवा भोक अपुरो हुँदै थियो ।
उनी थाकेर आउँदा मैले कहिल्यै थकान सोधिनँ । ममा त्यो संस्कृति नै थिएन । उनले कमाउदा निश्चय म खुसी थिएँ । मेरो आर्थिक जग मेरै अन्य सहकर्मीको भन्दा बलियो थियो तर त्यसको जस कहिल्यै उनको भागमा परेन । भित्रभित्रै म उनको प्रतिद्वन्द्वी स्थापित हुनथालेँ । उनले घरबाहिरका क्रियाकलापहरूमा भाग लिनु, उनको शैक्षिक योग्यता बढ्दै जानु, सङ्गठनको नेतृत्व गर्नु मेरा लागि अपाच्य हुन थाले ।
आखिर सामान्य कुरा थियो । महिला विकास कार्यालयकी उनी त योग्य अधिकृृत थिइन नै, सहजकर्ता पनि थिइन् । जागिरमा अरू पनि महिलाहरू छन् । वर्षहरू बित्दै गएपछि जिम्मेवारी पनि थपिन्छ । पद, कार्यभार थपिन्छ । दिनभरि तिनीहरू तनावमा रहन्छन् । फेरि घर, खाना, छोराहरू सबै हेरेकै हो । त्यति धेरै लापरवाही त हुँदै होइन । छोराहरू समेत गुनासो गर्दैनथेँ । पढाइमा पनि उत्कृष्ट नै थिए । म मात्रै हीनताबोधले हार्न थालेँछु ।
मेरा अधिकांश सपना भत्किदै गए । झर्किने, नबोल्ने र एक्लाएक्लै बस्ने हाम्रो चलन भयो । उनी पढ्न बस्नु, उनको फोन आउनु मेरो लागि असहृय हुँदै गयो । पछिपछि उनले मैले देख्ने गरी पढ्न छोडिन् । फोन उठाउन छोडिन् । आˆनो जीवनप्रति हामी उदासीन रहन थाल्यौँ । उदासीनता झाङ्गएिर हाम्रो सामीप्य खतम भयो । आभास, उच्छभास या प्रतिक्रिया सब क्रियाहीन थिए ।
आ-आˆना कमाईका हिसाब गर्दागर्दै हामी कति घण्टा बिताउँथ्यौँ । अब दुःख नगर्ने है भन्थ्यौँ, बजार जान्थ्यौँ तर किन्ने बेलामा खर्चको हिम्मत दुवैमा हुन्थ्यो र हाँस्दै र्फकन्थ्यौँ । अब हामी एक-अर्कालाई थाहा थिएन हामीले कति कमायौँ, कति जोगायौँ र कति खर्च गर्‍यौँ ?
हामी क्रमशः शारीरिक सम्पर्कमा समेत उदासीन हुँदै गयौँ । सिलसिला सुरु हुन मात्र गाह्रो कति छिटो अस्तित्वशील हुँदै गयो उदासीनता । सुरुसुरुमा एक/दुईपल्ट हामी समाजसँग डरायौँ । आफन्तसँग डरायौँ । कतिपल्ट नाटकीय सामीप्यको आयोजना गर्‍यौँ तर अब हामीले खुलमखुल्ला बहस सुरु गर्‍यौँ ।
यी छोराहरूले पनि हाम्रो मौनता थाहा पाए । या हाम्रो बहस थाहा पाए । मैले नै मौनता तोडेँ । म उनलाई जागिर छोडाउने पक्षमा पनि थिइनँ । उनलाई घरमा थुन्ने उद्देश्य पनि थिएन तर घरको अपुरो या मेरो मनको अपुरो हो, सहने स्थितिमा समेत तयार रहिनँ ।
हाम्रा हिसाबहरू तयार हुन थाले । यो मौनताको के हिसाब हुनु ? अनि बेहिसाब उनले मौनताको बाँध फुटाइन् ।
मलाई केही चाहिँदैन । म डेरामै बस्छु । जे कमाउँछु, त्यसैले खान्छु । यी सबै मेरा नामका धनीपूर्जाहरू आˆनो नाममा सार्नुस् । छोराहरू तपाईं नै हेर्नुस् । म मेरो कैदमुक्ततासँग यिनीहरूको दूरता साट्न तयार छु । व्यक्तिहीनतासँग म मात्र आमा हुन अब मेरो परिवेशले दिएन । मनले दिएन । अस्त्िवले त झन् दिँदै दिँदैन ।
म कानुनद्वारा पनि तपाईंलाई मुक्त गरौँला । आफूलाई खुसी राख्न तपाईं जे गर्नुहुन्छ, खुसीसाथ गर्नुस् । कति मानिसहरू अरूकै खुसीमा रमाउँछन् । तपाईं आˆनी श्रीमतीको खुसी त के उसको अस्त्िवदेखि समेत घिनाउनु भयो । आˆना एकाध साथीहरूले मप्रति गरेका टिप्पणीहरू समेत विश्लेषण गर्नुभएन ।
मैले तपाईंलाई एउटा श्रीमान्ले दिनुपर्ने व्यवस्थाहरूको कहिल्यै जिकिर गरिनँ । काँधकाँध मिलाउने पाइलापाइला चलाउने जीवनसाथी बन्न खोज्दा तपाईंले गलत मूल्याङ्कन गर्नुभो र ममा एउटी आमा र श्रीमती दुवै सहजकर्ताका रूपमा मात्रै खोज्नुभो जति उपलब्ध गराउँदै गएँ उति विक्षिप्त बन्नुभयो । विक्षिप्तता अब हामीबीच छेकबार बनेको छ जुन उपचारहीन जस्तो भइसकेको छ ।
तपाईंले आफूबाहेक कहिल्यै मलाई सोच्नु भएन । अब म झन् कसैले साथी बनाउनसमेत झस्कने व्यक्तित्वमा बदलिनेछु । अयोग्य सावित हुनेछु । सामाजिक टिप्पणीका प्रहारहरूसँग झनै चिरिनेछु । छोराहरूको दूरताले बेहोसिनेछु तर ती सबै पीडाभन्दा बढी मलाई विक्षिप्तताको प्रहार असहृय छ । जन्मदेखि खेपेको यो परिवेशले मलाई अझै परिपक्व बनाएछ तर तपाईं झन् काँतर हुनुभएको छ । एकदिन यही कायरता तपाइर्ंमाथि आइलाग्नेछ र मेरो तपस्याको वकालत गर्नेछ । तपाईं ब्यूँझनुहुनेछ ।
उनी यस्तै भन्दै गइन् । मसँग बसुञ्जेल पनि, मलाई छोडेपछि पनि जित उनकै भयो । उनीसँग मेरो अस्तित्वसमेत लिएर गइन् । मेरो विक्षिप्तता, प्रतिद्वन्द्व, डाहा या दोष सबै बगाएर गइन् ।
म उनलाई उनीसँग उनीजस्तै स्वीकार गर्ने बकसपत्र लेखिरहेछु । मेरो पारिवारिकताले म हुर्किएको सामाजिकताले, मेरो मनोविज्ञान दोषी थियो । जसले मेरो घर 'घर' हुन दिएन । अब म विक्षिप्तताको सामना गर्नेछु । मलाई माफ गर श्रद्धा । म रोगी थिएँ । अब निको भइसकेको छु ।